FLAC ဂီတ- အဓိပ္ပါယ်နှင့် လက္ခဏာများ - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 08/05/2022 11:00 | သတင်းအချက်အလက်
အခမဲ့ Lossless အသံ codecနောက်ကွယ်က နာမည်ပါ။ FLAC အသံဖော်မတ်အတွက် အတိုကောက်. ဤဖော်မတ်သည် ဖိုင်များကို အရည်အသွေး မဆုံးရှုံးစေဘဲ ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစား သေးငယ်စေရန် ဖိသိပ်သည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီလိုပါ။ အော်ဒီယိုပုံစံသည် စျေးကွက်တွင် ခြေကုပ်ယူရန် ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပုံစံအမျိုးအစားကို လက်ခံသော ကစားသမားအမျိုးမျိုးကို ရှာတွေ့နိုင်သည့် အခါများ ပိုများလာပါသည်။
ဒီနေ့ Post မှာ ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာအားလုံးကို မင်းကို အသိပေးသွားမှာပါ၊ ပထမဆုံး သိထားရမှာက FLAC ဖော်မတ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူ့ရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ တခြားအရာတွေနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။ စျေးကွက်တွင် ရှိပြီးသား အသံဖော်မတ်များ။
FLAC တိုးချဲ့မှုပါရှိသော ကစားသူများနှင့် ဖိုင်များ ပိုများလာပါသည်။ မတူညီသောဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နေရပြီး အချို့သောအနုပညာရှင်များကပင် လူတိုင်းသိသည့် ဂန္တဝင်များအစား ဤတိုးချဲ့မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အကြောင်းအရာကို သိရန် အရေးကြီးပါသည်။
1 FLAC အမျိုးအစားကဘာလဲ။
2 FLAC ဖော်မတ်၏ လက္ခဏာများ
3 FLAC ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
4 FLAC သို့မဟုတ် MP3 ကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်နည်း။
ယနေ့တွင်၊ MP3 ဖော်မတ်သည် အွန်လိုင်းတွင် သင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ဂီတကို မျှဝေနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော extension မဟုတ်ပါ။ FLAC extension သည် ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲ အသံအကြောင်းအရာဖြင့် ဖိုင်များကို ချုံ့ပါ။
FLAC လုပ်ဆောင်ပေးသော compression ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချ မူရင်းအသံသည် 60% အထိ လျော့နည်းသည်။
ဤသဘောတရားနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးကို အပြည့်အဝနားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမဦးစွာ လိုအပ်သည်။ bitrate ကဲ့သို့သော သဘောတရားများကို နားလည်ပါ။တစ်ဦးထက်ပိုသောအသံနှင့်နှိမ်နှင့်အတူအရှုံးမရှိဘဲ။
မသိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီသဘောတရားပါပဲ။ အချိန်ယူနစ်တစ်ခုအတွင်း လုပ်ဆောင်သည့် bit အရေအတွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် အော်ဒီယိုဖော်မတ်များဖြင့် လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Kilobits, Kbps နှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
တစ်စက္ကန့်လျှင် ဘစ်အရေအတွက်များလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အလုပ်လုပ်နေသော ဖိုင်ကို သိမ်းဆည်းရန် နေရာပိုလိုအပ်ပါသည်။ ဒါလေးရဲ့ အားသာချက်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အရည်အသွေးက ပိုမြင့်တယ်။ မူရင်းဖိုင်အပေါ် သစ္စာရှိသော ရလဒ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့် ဤအယူအဆ၊ ဘစ်နှုန်းသည် MP3 ဖော်မတ်အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ ဒီလိုဖြစ်တာ၊ ဖိုင်၏နောက်ဆုံးအရည်အသွေးသည်၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။. MP3 ဖော်မတ်၏ အဆိုးဆုံးသော ရှုထောင့်များထဲမှတစ်ခုမှာ သင်သည် ဤဖော်မတ်အောက်တွင် ဖိုင်များကို ချုံ့လိုက်သောအခါတွင် ဘစ်နှုန်းမြင့်မားသော ဖိုင်များကို အသုံးပြုလျှင်ပင် ၎င်းတို့သည် အရည်အသွေး ဆုံးရှုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
FLAC ဖော်မတ်၏ လက္ခဏာများ
ဒီပုံစံက ဘာပါလဲ၊ ဘာပါ၀င်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပြီးတာနဲ့ သူ့ရဲ့အချို့အကြောင်း ပြောပြပါမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိကလက္ခဏာများ သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လျှင်။
ပထမတစ်ခုက ၎င်းသည် ဂီတအယ်လ်ဘမ်များ၏ကာဗာများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အပြင် commands များကိုထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းကိုခွင့်ပြုသည်။ဆိုလိုသည်မှာ အယ်လ်ဘမ်အမည်၊ အနုပညာရှင်၊ အမျိုးအစား၊ သင်လိုအပ်သမျှ။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောလက္ခဏာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system အများစုတွင်ကစားနိုင်သည်။မီဒီယာပလေယာများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ မိုဘိုင်းလ်များ စသည်တို့အပါအဝင်၊
ဒါတွေအားလုံးအတွက် သူက စဉ်းစားတယ်။ multiplatform ပုံစံ၎င်း၏ အခမဲ့ ကိရိယာများ ကြောင့် သင် လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသံဖိုင်များကို FLAC သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားဖော်မတ်များထဲမှ FLAC ဖော်မတ်သို့ MP3 သို့ပင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိတဲ့ ပုံစံတွေ အများကြီးနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလို၊ FLAC နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် WavPack ကဲ့သို့တူညီသောလက္ခဏာများနီးပါးရှိသော်လည်း၊ ဤထုတ်ဝေမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အသုံးအများဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖော်မတ်ဖြစ်သည်။
FLAC ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ဘာတွေပါလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြပါမယ်။ ဤပုံစံ၏ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများ. ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲ သိမ်းဆည်းနိုင်စေမည့် codec ၏ အားသာချက်များကို သိရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤထုတ်ဝေမှုစတင်ချိန်မှစ၍ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နေသည့် အားသာချက်ကို ထောက်ပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ FLAC က ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုသည် မြင့်မားသောဘစ်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကို ခံစားပါ။900 နှင့် 1100 kbps ကြား။
ဤ extension ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်သည်။ ပိုင့်များကြားတွင် အသံဖိုင်များကို ချောမွေ့စွာ နားထောင်ပါ။သတင်းအချက်အလက်များသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသောကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသော အပြုသဘောဆောင်သောအချက်ကို ဖြစ်စေသည်။
တစ်ဖက်ကလည်း သီချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ နားထောင်မည့် အသံကို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် FLAC နှင့် အလုပ်လုပ်ရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ FLAC နဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပေးစွမ်းမယ့် အားသာချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုပါတယ်။ နမူနာနှုန်းထားများကို အကန့်အသတ်မရှိ ကစားပါ။ပြဿနာမရှိဘဲ 192000 Hz အထိ ခွင့်ပြုသည်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရွှေဆိုတာ တောက်ပြောင်တဲ့ ရွှေတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းဘက်က အဆိုးဆိုတာ အမြဲရှိနေတယ်။. ထို့အပြင် ဤအံ့သြဖွယ်ပုံစံတွင် အားနည်းချက်အချို့ရှိသော်လည်း လေးနက်မှုမရှိပါ။
သူတို့ထဲက ပထမတစ်ခုကတော့aဤ extension ပါသော ဖိုင်သည် နေရာအတော်အတန် ပိုယူပါသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ၊ FLAC ဖိုင်သည် မူရင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်ရှိသည်။ ဖိုင်များသည် 300MB သို့မဟုတ် ထို့ထက် အရွယ်အစားရှိခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ် အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အချက်ကတော့ ဖိုင်နဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ဘဲ၊ ကစားသမားအများစုက extension ကိုမထောက်ခံကြဘူး။. ၎င်းတို့သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေစွာ ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ သို့သော် FLAC ကို မပံ့ပိုးဘဲ MP3 ဖော်မတ်ကို မှီဝဲသော ကစားသမားများလည်း ရှိနေသေးသည်။
ဧကန်မုချ အချိန်ကာလ ရွေ့လျောသဖြင့် ဤနေရာမှ ဘာမှမဖြစ်၊ ဒီအားနည်းချက်တွေကို ဖြေရှင်းပေးတယ်။ နေရာပိုနည်းသော ဖော်မတ်တစ်ခုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကစားသမားအားလုံးက လက်ခံပါသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်လွယ်ကူသော ဖော်မတ်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်များသည် အခြားအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
FLAC သို့မဟုတ် MP3 ကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်နည်း။
FLAC အ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းမဟုတ်ဘဲ တေးဂီတ သို့မဟုတ် အသံအပိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည့် ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုချင်တာရှိရင် သုံးပါ။ သင့်အသံများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး ထိန်းသိမ်းပါ။.
တစ်ဖက်ကလည်း ပုံစံ MP3 ယခင်ဖော်မတ်ထက် အရည်အသွေးနိမ့်သောနေရာတွင် အလုပ်လုပ်သည်။ဒါပေမယ့် အဲဒါက မတူညီတဲ့ စက်တွေမှာ အသံဖိုင်တွေကို ဖွင့်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်းတွင် ဆောင်ထားရန်နှင့် အားကစားခန်းမ၌ နားထောင်ရန် သီချင်းဖိုင်တွဲတစ်ခုရှိလိုပါက ၎င်းသည် သင့်လျော်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလုပ်တွဲလုပ်ရင် သတိထားရမယ့်အချက်ပါ။ MP3 သည် ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း ဖော်မတ်သည် ဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့နေပါသည်။ အရည်အသွေး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် FLAC ကိုအသုံးပြုပါက မူရင်းဖိုင်၏မိတ္တူနှင့်တူပါလိမ့်မည်။ FLAC ဖိုင်မှ MP3 သို့သွားခြင်းသည် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခါသမယများစွာတွင်သတိပြုသင့်သည်။ FLAC ဖိုင်နှင့် အရည်အသွေးမြင့် MP3 ဖိုင်ကြား အရည်အသွေး ကွာခြားချက်မှာ မမြင်နိုင်လောက်ပါ။ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤအရာအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခြင်းဖြင့်၊ FLAC သည် အရည်အသွေးကို လေးစားသောကြောင့် သင့်အသံကို မူရင်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားလိုပါက FLAC သည် စံပြဖော်မတ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » သတင်းအချက်အလက် » FLAC ဂီတ- အဓိပ္ပါယ်နှင့် လက္ခဏာများ
Skype ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ